प्रकासित मिति : १९ भाद्र २०७५, मंगलवार प्रकासित समय : ०८:१९
काठमाडौं भदाै १९। वार्षिक न्यूनतम ३५ करोड रुपैयाँको आर्थिक नोक्सानी पारिरहेका चिनियाँ जहाज ल्याउन सिफारिस गर्ने को को थिए ? चीन सरकारले यही सिफारिसलाई देखाएर ती जहाज (६ वटै) नेपाल सरकारलाई किन्न दबाब दिएको थियो।
वाई १२ ई का सम्बन्धमा रिपोर्ट के भन्छ ?
हारबिन एयरक्राफ्ट इन्डष्ट्री ग्रुपबाट सिधै खरिद गरिएको वाई–१२ जहाजका सम्बन्धमा रिपोर्टमा उल्लिखित कुरा र उक्त जहाज चलाएपछि निगमले भोगेका बेहोरा आकाश–जमिन फरक छन्। रिपोर्टले यो जहाज डोर्नियरको तुलनामा मनाङजस्तो हिमाली क्षेत्रमा धेरै भारी बोकेर मजाले उड्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। डोर्नियर जहाज जान-उड्न नसक्ने नेपालका विकट हिमाली जिल्लालाई यो जहाज अति उपयुक्त भनिएको छ।
‘वाई १२ ई ले निगमले तय गरेका सबै सेक्टर मनाङ, डोल्पा, भोजपुर, रुम्जाटार, रुकुम, ताप्लेजुङ, थामखर्क ९सोलु० कांगेलडाँडा आदिमा सजिलै उडान भर्न सक्छन्,’ रिपोर्टमा छ, ‘यी जहाज आएपछि निगमका पुराना ट्वीनवटरलाई विस्थापित गर्न मिल्छ।’
यसो भनेर सिफारिस गरिएका यी चारवटा जहाज कुनै पनि दुर्गम क्षेत्रमा नउड्ने मात्र होइन यिनीहरू उड्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर परीक्षण उडानसमेत गरिएका छैनन्। निगमले यी जहाजलाई सिमरा, भैरहवा, पोखरा र सुर्खेतमा मात्र उडाइरहेको छ। अर्को कुरा, जहाज ल्याउन सिफारिस गर्ने विजय लामा र श्रवण रिजाल अहिले पनि निगममा उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छन्। जहाज ल्याइएका चार वर्ष बितिसकेको तर उनीहरूले परीक्षण उडानसमेत गरेका छैनन्।आजको अन्नपूर्णपोष्टमा छ ।